Sii-hayaha RW dalka ‘Mahdi’ oo kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Sii-hayaha xilka xalka Ra’iisul Wasaaraha dalka, Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa kulan la qaatay Madaxweyne ku-xigeenka dolwad Goboleedka Galmudug, Mudane Cali Daahir Ciid oo maalmahaan Safar shaqo ku jooga magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiintan ayaa kawada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidii dowladda Federaalka ah ay uga qayb qadan lahayd Horumarinta deegaannada Galmudug.
Labada dhinac ayaa sidoo kale kawada hadlay sidii ay wadashaqayn xoggan u dhexmari lahayd Wasaaradaha Xukuumadda Fadaraalka iyo Wasaaradaha Dowlad Goboleedka Galmudug.
Sii-hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa dhankiisa Madaxda Galmudug ku amaanay shaqadii wanagsanayd ee ay qabteen muddadi koobnayd ee ay xilka hayeen, isagoo tilmaamay inay garab u noqon doono horumarada ka socda Galmudug.
Tags: kulan, madaxweyne ku xigeenka Galmudug, Mahdi, Sii hayaha dalka